Sanadihii 20 ee lacagta hal mar, mid kasta oo Faransiis ah ayaa lumiyay celcelis ahaan 55.996 euros - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Sanadihii 20 ee lacagta hal mar, mid kasta oo Faransiis ah ayaa lumiyay celcelis ahaan 55.996 euros
Sanadihii 20 ee lacagta hal mar, mid kasta oo Faransiis ah ayaa lumiyay celcelis ahaan 55.996 euros
TCHINDA FABRICE 27 February 2019
Lacagihii ugu badnaa ee sannadihii 20 ee lacagta euroda waa Faransiiska iyo Talyaaniga, sida ay muujisay daraasad ay samaysay laba dhaqaaleyahan oo ka tirsan Xarunta Siyaasadda Yurub ee Freiburg (CEP). Ugu dambeyntii wuxuu xisaabiyay in mid kasta oo Faransiis ahi uu arkay inuu ku celiyo hantidiisa 55.996 euros celcelis ahaan.
Sida laga soo xigtay daraasadda, sannadaha 20 ee jiritaanka hal waddan oo Yurub ah wax faa'iido ah kama helin qof walba. Sidaas darteed, Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa u muuqda inay yihiin kuwa khasaare badan, halka kuwa ku guuleysta ay yihiin Jarmalka iyo Holland. Xisaabinta waxaa fuliyey Xarunta Siyaasadda ee Yurub ee Freiburg (CEP) iyada oo ololaha doorashooyinka Yurub ay soo dhaweeyeen, waxaana soo xigtay saxaafadda.
Sidaasi darteed, laba dhaqaaleyah oo Xaruntu ku qiyaastay in tan iyo markii la soo bandhigay lacagta teknoolajiyada yurub, Faransiisku waxay arkeen hantidooda maaliyad ay ku dhicin celcelis ahaan 55.996 euros. Waxaa ka sii daraya: Talyaanigu waxay ururiyaan 73.605 euros khasaaro dakhliga. Laakiin Paris iyo Rome waa "labadii sanno ee ugu dambeeyay" ee fasalka, halka hogaamiyeha shahaadiga ahi uu yahay Berlin. Sidaas darteed, Jarmal kastaa wuxuu arkay "koritaankii barwaaqada", celcelis ahaan, 23.116 euros.
"Euro waa la burburin doonaa": 27 sano ka dib Heshiiskii Maastricht, mustaqbalka EU?
Si kastaba ha ahaatee, qorayaasha daraasadda ayaa aaminsan in dib-u-helidda "barwaaqada" weli ay suurtagal tahay. Ilaa iyo intii Faransiisku ka walaacsan yahay, waxay rumaysan yihiin in "waa in ay gabi ahaanba ilaaliyaan waddada dib-u-habeeyn ee taas Madaxweyne Macron ayaa ku sii socota. "Wareysi lala yeeshay Sputnik, faallo siyaasadeed iyo akadeemiyadeed Rodney Atkinson, oo ah qoraaga laba buug oo ku saabsan abuurista EU-da iyo xukunka, ayaa ku tilmaamay euro" sida ugu burbursan dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda ee Midowga Yurub ". Wuxuu lahaa, sidoo kale, wuxuu siiyay saadaalin yar oo rajo leh oo lagu saleeyo lacagta hal mar.
"Euro ayaa burburin doona sida ururada kale ee lacagaha kale, laakiin way adagtahay in la ogaado marka dhibaatada iyo sinnaantu ay gaari doonaan heerkaas oo ah siyaasadaha kacaaniga ah ee ku khasbi doona xukuumadaha qaranka in ay baxaan," ayuu yiri.
Source: https: //fr.sputniknews.com/international/201902261040175331-france-euro-pertes/
Cameroon ayaa loo doortay in ay martigeliso Golaha 51e Guud ee Ururka Diyaarad Afrikaanka ah oo la qorsheeyay November November
Cameroon - Foumbot: Dukaamada 12 ayaa kor u kacaya qiiqa